Ny bokin’ny Apokalipsy na Fanambarana
Ary raha nisy tsy hita voasoratra ao amin’ny bokin’ny fiainana, dia natsipy tany amin’ny farihy afo izy (Apokalipsy 20:15)
Ny bokin’ny Apokalipsy na fanambarana, dia boky farany ao amin’ny Baiboly. Ny Apostoly Jaona no nanoratra azy, tamin’ny fotoana indrindra naha-sesitany azy tany amin’ny Nosy Patmosy, vanim-potoana nampivaivay ny fanenjehana tamin’ny nanjakan’i Domitien, Emperora romana tamin’izany fotoana izany. Raha aharihary ary ao amin’ity boky ity ny herin’i Satana farany mandrombaka sy mamiravira ny zanak’Andriamanitra sy ny Kristiana, etsy an-daniny kosa, atao ren-tany, ren-danitra, hitam-poko, hitam-pirenena fa, Kristy no Tompon’ny teny farany, Izy irery ihany no tsy maintsy manjaka mandrakizay mandrakizay.
Raha nampiseho ny heriny ny fahavalo ary nihetraketraka tamin’ny Avo indrindra sy ny olony, dia naneho ny fahefany kosa ny Zanak’ondry ary niseho amin’ny maha-Mpanjaka sy Mpitsara Azy ato amin’ny Bokin’ny Apokalipsy. Tsy maintsy manjaka Izy ambara-panaony ny fahavalony rehetra ho fitoera-tongony (I Kor 15: 25).
Iza avy ary izany fahavalon’I Kristy izany? Mazava ny valin-teny dia Ilay Bibidia na ilay dragona izay mitsangana hanohitra ny Tsitoha ary hanenjika ny Zanak’Andriamanitra rehetra. Ary na iza na iza ihany koa miankohoka eo anoloan’Ilay bibidia sy ny sariny dia izy koa no hisotro ny kapoaky ny fahatezeran’Andriamanitra:“ary raha nisy tsy hita voasoratra ao amin’ny bokin’ny fiainana dia natsipy tany amin’ny farihy afo izy".
Ny Zanak’ondry, araka ny boky rehetra mialohan’ny bokin’ny Apokalipsy dia tsy nitsahatra nizara fiainana sady fiainana be dia be. Izay nino AZY DIA NANANA FIAINANA, ary ny Tompo mihitsy no nilaza fa voasoratra any an-danitra ny anarany. Voarakitra any amin’ny bokin’ny fiainana ny anaran’ny manaiky ny Zanak’Andriamanitra. Mijalijaly izy ety noho ny ataon’ny mpampahory azy, tahaka izay nanaovan’ny egyptiana ny zanak’Isiraely fahizay, fa rehefa tonga kosa ny andro famonjena sy andro fankasitrahana, handova ny lanitra sy ny toeram-pahasambarana mandrakizay. Fa ny tsy nino kosa, etsy andanin’izany, dia ireo izay tsy hita ao amin’ny bokin’ny fiainana ny anarany, dia fanamelohana mandrakizay no miandry azy. Dia natsipy tany amin’ny farihy afo izy. Izany hoe ireo izay nanda ny fiainana natolotry ny Zanak’ondry azy dia halefa any amin’ny toerana efa voavoatra ho an’ny devoly sy ny anjeliny dia ny farihy afo izany. Ry Havana malala, misy ny fiainana be voninahitra omanin’ny Tompo ho antsika, ary misy koa ny helo, toeram-pahaverezana ho an’ny tsy mino. Izay tsy mety mino no helohina.
Azo antoka ary ve fa voasoratra any amin’ny bokin’ny fiainana ny anarantsika? Mety ho sarotra tokoa ny valin’izany fanontaniana izany, nefa aleo raisintsika eto amin’ny Baiboly ihany ny valiny; indrindra ato amin’ny bokin’ny Apokalipsy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin’ny bokin’ny fiainana tokoa aho fa hanaiky ny anarany eo anatrehan’ny Raiko sy eo anatrehan’ny anjeliny (Apokalipsy 3:5). Tsy maintsy miady amin’ny bibidia sy ny anjeliny isika, dia amin’ny devoly sy satana amin’izao andro farany izao. Fanampin’izany, mila miaritra fanenjehana ary mahazaka fakam-panahy tahaka an’ireo Maritiora fahizay.
Koa dia mahereza fa ny helo dia natao ho an’ny devoly sy anjeliny fa tsy natokana ho an’ny zanak’Andriamanitra na oviana na oviana.